Umkhiqizo wezingubo zangaphandle osuselwe eNew Zealand uKathmandu ubambisene neThe Renewal Workshop, umhlinzeki ohola phambili wezixazululo eziyindilinga, ukuqala iphrojekthi yemephu eyindilinga yokuhlinzeka ngezinhlelo zokuvuselela nokuvuselela amakhasimende ayo ngokuzayo. Lo mkhiqizo uphinde wanxusa amabhizinisi ezemfashini ...Funda kabanzi »
IFashion for Good, ipulatifomu yemfashini esimeme, iUtrecht University kanye neSustainable Packaging Coalition, babhale ngokubambisana iphepha elimhlophe eliveza ukubuka konke kokuphinda kusetshenziswe embonini yezemfashini. Inikeza ukucatshangelwa okubalulekile kokutholwa kwezinga elibanzi ...Funda kabanzi »
IChampion Thread yethula umugqa weRenu wemicu yokuthunga esetshenziswe kabusha engu-100%
Ikomkhulu layo eliseGastonia, iChampion Thread Company (CTC), umhlinzeki womhlaba wonke wentambo, intambo, kanye nezinto ezahlukahlukene zemikhiqizo ethungiwe, yethule umugqa weRenu wazo zonke izintambo ezizungezile, zemvelo zezimboni zokuthunga ezenziwe ngokuphelele ezintweni ezingezona ezentombi. Imicu engu-100 yamapayipi esetshenziswe kabusha ...Funda kabanzi »
INDLELA ELUHLAZA Imboni yemikhiqizo yendwangu efanelekile iqinisekisa ukuphepha nemvelo ehlanzekile, ngaleyo ndlela iqinisekise imodeli yebhizinisi yesikhathi eside yazo zonke izinkampani ezithintekayo. Ubuchwepheshe bamuva kanye nemikhuba emihle esetshenzisiwe iholela kunzuzo yokuncintisana ngenkathi kuncishiswa kanyekanye imiphumela ku-env ...Funda kabanzi »
IH & M Group, okuyinkampani yaseSweden yezingubo ezidayisa izingubo eziningi, yethule uhlelo olusha lokufaka amaphepha olunemikhiqizo eminingi olungasetshenziswa futhi lusetshenziswe kabusha. Njengoba ukuthenga nge-inthanethi kukhula emhlabeni wonke futhi ngaleyo nsila yepulasitiki, i-H & M izwa isidingo sokuthola izixazululo zokupakisha okusimeme. I ...Funda kabanzi »
Ukuhweba ngezambatho kuqala ukukhombisa ukutakula kusuka ku-COVID-19
Idatha yokuhweba yezingubo zakamuva (izahluko 61 no-62 zekhodi ye-HS) ziveza umthelela womhlaba wonke we-COVID-19 nezimpawu zokubuyiselwa komkhakha, ngokusho komnyango wezolimo wase-US (USDA). Ukululama kweChina kuyashesha ukwedlula amanye amazwe. Kodwa-ke, ijubane lokutakula kumthengi de ...Funda kabanzi »
Izintengo zikakotini zomhlaba wonke manje zeqa amazinga wangaphambi kobhadane
Amanani okotini womhlaba wonke, abekade enyuka ngaphambi kwalolu bhubhane, ahlehle kakhulu kusuka ngoJanuwari kuya ku-Ephreli, ikusasa le-NY lehla laya eminyakeni eyishumi ephansi. Kodwa-ke, amanani ahlangane futhi manje adlula amazinga wangaphambi kobhubhane njengoba ukusetshenziswa kwesigayo kuyalulama nezinye izinto zisekela amandla akamuva.COVID-19 ...Funda kabanzi »